इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्न नेपाली टोली भोली चीन जाने
काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सबै विकल्प अगाडि बढाइएको बताएका छन् । चीन भ्रणमणबाट स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालयमा बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले..
​नाकाबन्दीकाबीच दैनिक डेढ लाख लिटर इन्धन भित्रिन्छ
चितवन । पर्साको ठोरीनाकाबाट चितवनको माडी हुँदै दैनिक रुपमा एक लाख ५० हजार लिटरको हाराहारीमा इन्धन नेपाल भित्रिएको पाइएको छ।जसले नारायणी, धौलागिरि, गण्डकी र बाग्मती अञ्चलका विभिन्न जिल्लाको अत्यावश्यक सेवा..
​सुनको भाउ तोलामा पाँचसय रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सुनको सुनको भाउ बुधबार पनि तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला ४८ हजार रुपैंयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले..
​सुन सस्तियो ! तोलाको ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ
काठमाडौं । बिवाहको मूख्य समय मानिने मंसिर महिना सुरु भएकै दिनमा सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएर ४८ हजार ५..
कर दिवसका अबसरमा राज्यलाई धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा कम्पनी सम्मानित
काठमाडौं । सिप्रदि ट्रेडिङका अध्यक्ष सिद्धार्थ समशेर राणालाई उछिन्दै हिमालयन र एसियन डिस्टीलरीका लगानीकर्ता प्रगुणराज भण्डारी सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने नेपाली घोषित भएका छन् । त्यसैगरी महिलातर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने..
चिनले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ब्यवसायिक सम्झौता गर्न बोलायो
काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चकिएपछि चीनसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेर ईन्धन आपुर्तिका लागि ब्यवसायिक सम्झोताको पर्खाईमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई अब चीन जाने बाटो खुलेको छ..
परिसंघले सरकारलाई भन्यो- विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएर राहत देउ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनको मारका कारण उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तथा..
​नाकाबन्दी पछि आज एकैदिन १ सय ३१ ट्यांकर इन्धन नेपाल भित्रिए, कुन नाकाबाट कति ?
काठमाडौं । वीरगञ्ज घटनापछि आइतबार सबैभन्दा धेरै इन्धन ट्यांकरहरु नेपाल भित्रिएका छन् । प्रहरीसँगको झडपमा गोली लागेर वीरगञ्जका एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि भारतले सीमा नाकाहरुमा थप कडाइ गरेको थियो,..
​उपराष्ट्रपतिसँग राजदूत मास्केले भने चीन पाँचखालसम्म ग्यास ल्याउन तयार
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग चीनका लागि नेपाली राजदूत डा महेश मास्केले आज उपराष्ट्रपति कार्यालय बहादुर भवनमा भेटी चीनबाट इन्धन ल्याउन दुई देशबीच सैद्धान्तिक सम्झौता भइसकेकाले व्यापारिक सम्झौताको अन्तिम तयारी..
​सरकारले आजदेखि प्रति केजी १५ रुपैयाँमा दाउरा बेच्न सुरु गर्‍यो
काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएपछि सरकारले बिकल्पमा आजदेखि काठमाडौंमा दाउरा बेच्न सुरु गरेको छ । टिम्बर कर्पोरेसनले आजदेखि काठमाडौंको गौशाला र ललितपुरको बालकुमारीस्थित डिपोबाट दाउरा बिक्रि..
​पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा कालोबजारी गर्ने पम्पमाथि मुद्दा
लहान । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखाएर पेट्रोल पम्पभित्र पेट्रालियम पदार्थ लुकाई बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई जनामाथि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा संलग्न रहेको आरोपमा..
पुरानो बसपार्कमा २९ तले ‘काठमाडौँ भ्यू टावर’ शिलान्याश
काठमाडौँ । पुरानो बसपार्कमा २९ तले ‘काठमाडौँ भ्यू टावर’ भवनको आज उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिलान्याश गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा।लि बीच भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत..
​भारतीय नाकाबाट आज कति भित्रियो इन्धन ?
काठमाडौं। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरु मंगलबार पनि प्रभावित बनेका छन् । मंगलबार दिनभरिमा विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट ५ ट्यांकर पेट्रोल, ८ ट्यांकर डिजल र ४ बुलेट ग्यास नेपाल..
वीरगञ्जको गोदाम र कण्टेनर पार्किङ शुल्क मिनाहा, आयातकर्तालाई करोडौ रुपैयाँ राहत
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहले आयातित मालसामानको गोदाम र कण्टेनरको पार्किङ शुल्क मिनाहा गरेको छ । मधेस आन्दोलनको असहज अवस्थाका कारण आयातकर्ताले समयमा ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन..
​कर बुझाउने म्याद पूनः एक महिना थपियो, मसिंर २५ सम्म बुझाई सक्नु पर्ने
काठमाडौं । सरकारले आयकर बुझाउने म्याद फेरी एक महिना पर सारेको छ । सोमबार अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले आयकर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ गतेबाट सारेर मंसिर २५ बुझाउन सक्ने बनाईको छ । मधेशमा..
​भोलीबाट सरकारी र अतिआवश्यक बाहेकका सवारी साधनले ईन्धन नपाउने
काठमाडौ । इन्धन अभावका कारण नेपाल आयल निगमले सुरक्षा निकाय र अत्यावश्यक निकायलाई बाहेक अन्यलाई अब तेल दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल आयल निगमले सरकारी चासो नहुदाँ वैकल्पिक उपायबाट..
२ लाख परिवारलाई पुग्ने ग्यास नाकाबन्दीले बाटो मै अलपत्र
काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीका बीरगन्ज नाका ठप्प छ तर वीरगन्जबाहेकका नाकामा पनि कडाइ गरेपछि १ सातादेखि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन सकेको छैन । मुलुकभर पेट्रोलियम संकट चुलिएको छ भने करिब..
निगमले अब तेल साझा र सुरक्षा निकायका पेट्रोल पप्पबाट मात्र वितरण गर्ने
काठमाडौं । वीरगञ्जमा प्रहरीको गोलीबाट भारतीय नागरिक मारिएपछि सोमबारदेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन ठप्प भएको छ । भारतबाट तेल नआएपछि तेल संकट थप गहिरिँदै गएको छ । आयल निगमको मौज्दात..
७१ ट्याङ्कर चिनियाँ पेट्रोल भित्रियो, थप ट्याङ्कर केरुङतर्फ
रसुवा । चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख मध्ये हालसम्म ६ लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल नेपाल भित्रिएको छ । अहिलेसम्म ७१ वटा ट्याङ्कर मार्फत केरुङबाट ६ लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल..
​पन्ध्र दिनमा पचास लाख सिलिण्डर ग्यास ल्याउन सक्छौंस् व्यवसायी
चितवन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन र ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला एनेकपा माओवादी निकट व्यापारीको केन्द्रीय सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनले सरकारले सहयोग गरे चीनबाट ग्यास र इन्धन..
स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि जलाशययुक्त आयोजना, मुलुकभित्रै जुट्छ लगानी
काठमाडौँ । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । मुलुकलाई इन्धनका आत्मनिर्भर बनाउन र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत्भन्दा..
​नाकाबन्दीले ग्यास अभाव भएपछि विद्युतीय चुल्होको कारोबार बढ्यो
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर बजारबाट काठमाडौँ, पोखरा लगायतका देशका अन्य क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको निर्यात पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । यहाँका व्यापारी तथा स्थानीयवासीले भारतको सीमावर्ती सहर बनबासा, खटिमा, टनकपुरबाट समेत..
​एक अर्बभन्दा बढी मूल्यका सामान चीनबाट नेपाल भित्रिदैं
रसुवा । नेपाल ल्याउनका लागि विभिन्न उपभोग्य चिनियाँ सामान केरुङ आइपुगेको छ । नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका सचिव मुकुन्द पौडेलका अनुसार मुसा नामक चिनियाँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले एक अर्बभन्दा बढीको तयारी पोसाक,..
आज झण्डै चार लाख लिटर पेट्रोल बाँडिदै निगम, कहाँ कहाँ पाइन्छ तेल ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आज शुक्रबार निजी सवारीलाई लक्षित गरी झण्डै चार लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ ।निगमले आज शुक्रबार ३१ देखि ५० नम्बर लटका मोटसाइकल तथा ६ देखि..
​चीनले नेपालसँगको थप सात नाकामा भन्सार कार्यालय खोल्ने
काठमाडौं । चीनले नेपालसँगको थप सात वटा नाकाबाट ब्यापारिक कारोबार सुरु हुने भएको छ । नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबीच भएको वार्तामा सातवटा नाका भन्सार स्थापना गर्न सहमति भएको हो । नेपालमा..
​बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट यसरी लुटियो ग्यास
काठमाडौं । राजधानीबासीले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेकै समयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट बिहीबार बिहान १५ सिलिन्डर ग्यास लुटिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यास लिन लाइन लागेका सर्वसाधारणले मनमैजुकी व्यवसायी विमला..
​चीनबाट आज १ लाख ७६ हजार लिटर पेट्रोल आउने
रसुवा । चीनले अनुदानमा दिएको १ लाख ७६ हजार लिटर पेट्रोल आज (बिहीबार) काठमाडौं भित्रिँदै छ । चीनको केरुङबाट पेट्रोल भरेर फर्किएका १८ वटा ट्यांकर आज रसुवाबाट काठमाडौं आइरहेका छन् । रसुवाका..
के तपाईलाई ग्यास चाहियो ? ४२६२५८६ मा फोन गर्नुस्
काठमाडौं । तपाईं खाली सिलिन्डर बोकेर ग्यासको लाइनमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ र ग्यास कहाँ पाइन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने आयल निगमले सञ्चालनमा ल्याएको ०१–४२६२५८६ मा फोन गर्नुस् । तपाईंको नजिकै..
​भूकम्प, हड्ताल र नाकाबन्दीको असरले बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको नाफा घट्यो
काठमाडौं । भूकम्प र तराईको बन्दको असरले बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालको नाफा घटेको छ। साउनदेखि असोज मसान्तसम्म कम्पनीले निकालेको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ।..
​नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमाता विश्वकै कमजोर
काठमाडौं । भूपरिवेष्ठित र तीनतिर सीमाना जोडिएको अविश्वासिलो छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा विश्वकै कमजोर मुलुकको रुपमा देखिएको छ । छिमेकसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको..
Results 889: You are at page 22 of 30